I-TAG Ingeza Isici Sokuqapha Okuguqukayo Ekusebenzeni Kwezinga Elilandelayo Kokuqapha Okuminyana Kakhulu | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » I-TAG Ingeza Isici Sokuqapha Esiguqulwayo Sokusebenza Kwezinga Elilandelayo Ekuqapheni Okuminyana Kakhulu
I-TAG Ingeza Isici Sokuqapha Esiguqulwayo Sokusebenza Kwezinga Elilandelayo Ekuqapheni Okuminyana Kakhulu
Ukuqapha okuguqukayo kukhulisa izinsiza esakhiweni nasefwini
ITel Aviv - Septhemba 8, 2020 - TAG, umholi womhlaba ku-100% SW, 100% IP, 100% COTS / Cloud, Probing, Monitoring kanye Ukubuka okuningi izixazululo, umemezele ukuthi i-MCM-9000 all-IP, ipulatifomu yayo yonke isoftware ithuthukisiwe ngokufakwa kwesici se-Adaptive Monitoring. Ukuqapha okuguquguqukayo kunika opharetha ubukhali obukhulu ngokwengeziwe ekuhloleni ukucwaningwa kwabantu abaningi nokuqapha ngokunika amandla ukwabiwa okunamandla, okuzenzakalelayo, kokundiza kwezinsizakusebenza zokuqapha ngokwenziwa ngakunye kokusakazwayo. Isici esiguqula umdlalo siletha opharetha inzuzo ebonakalayo yokusebenza okuhle okuthi yona ilondoloze izindleko zezindleko namandla okuqapha abanzi.
I-MCM-9000 ye-TAG inikeza ukuhlolisisa nokuqapha okuphelele kwazo zonke izingqimba zokudlulisa ezivela ku- SMPTE I-ST 2110 / 2022-6 ingacindezelwe ku-MPEG-TS icindezelwe futhi isakazwa yi-OTT kuze kufike kokuqukethwe kwevidiyo okufakiwe nekhwalithi yayo. Inikela ngezici ezingaphezu kuka-350 zokuhlola futhi isekela wonke amazinga amakhulu embonini, isoftware ye-TAG ingaqapha izinkulungwane zamasignali alalelwayo namavidiyo, yenza ukuhlaziywa okuzenzakalelayo kwevidiyo nedatha ngokuya ngezifanekiso ezichazwe ngaphambilini, amazinga embonini, neminye imingcele yobuchwepheshe nemingcele ebekwe ngumhlinzeki.
Kuze kube manje, i-MCM-9000 inikeze izindlela ezimbili ezihlukile futhi ezihlukile zokuqapha ezihlukahluka ekhonweni lokubona nokusetshenziswa kwemithombo:
Imodi Yokuqapha Ephelele - umthombo wokufaka uqoshwe ngokuphelele ngesikhathi sangempela sokuhlaziywa kwephenyo, okwethusayo kwamaphutha nokubukiswa kwevidiyo bukhoma kokukhishwayo kwe-Multiviewer mosaic.
Imodi Yokukhanya - umthombo wokufaka uphenyo futhi uyethuka, kepha uhlukaniswe amakhodi kancane ngakho awukhonjiswa. Le modi yokuqapha idinga izinsiza ezingaphansi kakhulu.
I-MCM-9000 manje inyusa ibha ngokungeza i-Adaptive Monitoring epulatifomu. Ukuqapha okuguqukayo kuvumela isisombululo se-TAG ukuqapha kunoma yiziphi izindlela ezintathu ezisebenzayo — okugcwele, okukhanyayo, nokwengezwa kokuqapha okungaphezulu kokukhanya — ngokwesisekelo somthombo ngamunye wokufaka nangendlela eguquguqukayo. Kusetshenziswa imingcele ebekwe opharetha ngaphakathi kwesoftware ye-TAG noma kudalwe umyalo we-API kusuka kumadivayisi wangaphandle aqapha imvelo yonke, uhlelo luzozivumelanisa ngokuzenzakalela phakathi kwezindlela zokuqapha ukuqinisekisa ukuqapha okuhle kwayo yonke imifudlana ngaso sonke isikhathi nokubona ngokuphelele amaphutha.
Ukuphela kokuphenya okuhlanganisiwe, ukuqapha, kanye ukumbumbuluzwa Isixazululo sokunikeza i-Adaptive Monitoring, isixazululo se-TAG sinikeza ama-opharetha amandla abalulekile wokusebenzisa i-CPU ngaphandle kokudela ukutholwa kwephutha. Ayigcini nje ngokukhulisa amandla wokuqapha lapho usebenzisa i-hardware esendaweni, kepha iveza izinzuzo ezinkulu kakhulu ekusebenzeni okususelwa emafini ngamandla okushintsha ngokunamandla ukusetshenziswa kwezimo ngokususelwa kunesidingo nganoma yisiphi isikhathi. Ukusuka kude nezingxenyekazi zekhompuyutha, opharetha abasadingi ukukala imishini nengqalasizinda yabo ukusekela umthamo wesiteshi omkhulu-noma ukushiya i-hardware ingasetshenziswanga ngezikhathi ezingezona eziphakeme. Ukuhlanganiswa kwesoftware ye-TAG ne-Adaptive Monitoring, kanye nezinsizakusebenza ezisebenza ngamafu kuvumela ama-opharetha ukuthi aqhubekele phambili kumodeli yokonga yokusebenzisa ngayinye lapho bezokala khona izimo ukufanisa isidingo sabo.
Noma ngabe kusezindlini noma kusefwini, i-Adaptive Monitoring iqinisekisa ukuthi uma kutholakala inkinga, isiteshi sishintshelwa ngokuzenzakalela kumodi yokuqapha ephelele. Ubungqabavu bale modeli benza isoftware ye-TAG ibe yisixazululo esifanelekile sokuhlola nokuqapha kahle iziteshi ze-OTT ngaphandle kokuyekethisa.
Ukuqapha okuguqukayo futhi kuvumela opharetha ukuthi bahlangane futhi bafanise izindlela ezahlukahlukene zokuqapha ze-TAG. Esikhundleni sokunikela nge-100% yamandla we-CPU wokuqapha okugcwele ngasikhathi sinye, angakhetha ukukhanya noma ukukhanya okungeziwe futhi asebenzise ingxenyenamba yezinsizakusebenza. Ngenkululeko yokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuqapha ngokuthunyelwa okukodwa, ama-opharetha angasebenzisa ngokunenzuzo ukwabiwa kwezinsizakusebenza nokuzivumelanisa nezimo ukuze bathole okuningi ezinsizakalweni zabo zeseva futhi baqiniseke ukuthi amaphutha azobonakala lapho kwenzeka - kungakhathalekile imodi.
Ngamafuphi, ukusebenza okusha kwe-Adaptive Monitoring kunika amandla umsebenzisi ukuthi akhethe imodi yokuqapha esiteshini ngasinye enekhono lokuyiguqula ngamandla. Izinzuzo zifaka phakathi: ukusetshenziswa kwe-CPU ngaphandle kokudela ukutholwa kwephutha; ukuguquguquka kokusebenza; ukusebenza kwamafu okulula ngamandla okuqina lapho kuqapha inani elikhulu leziteshi; nokusetshenziswa nokuphathwa okungcono kwezimo ze-Cloud nezinsizakusebenza ze-Hardware ezinganciphisa i-OPEX ne-CAPEX.
Kuchaza iTomer Schechter, i-TAG CTO, “Imboni iyathuthuka kanti futhi nezidingo zamakhasimende ethu ziyashintsha. Isoftware ye-TAG ayisekeli kuphela ukuqapha okusebenzayo kuzo zonke iziteshi, kepha futhi inikezela amakhasimende indlela eya phambili yokukhula okuqhubekayo. Ngalokho engqondweni, sithuthukise lesi sici ukuqinisekisa ukuthi inani lamashaneli namaphuzu okufanele aqashwe angalokothi abekwe engcupheni ngenxa yezizathu zezezimali. Kuthuthukiswe nge-Adaptive Monitoring, ukuphenya kwe-TAG's MCM-9000, ukuqapha, kanye Ukubuka okuningi isoftware inokusebenza kahle kathathu noma kahlanu njengoba ikhulisa izinsiza ezikhona. Futhi njengakwezinye izibuyekezo nezithuthukisi zesoftware ye-TAG, lesi sici asitholakali ngaphandle kwezindleko kumakhasimende we-TAG amasha nalawo akhona ngaphansi kwezivumelwano zokusekelwa. ”
Ngaphambilini: Iphaneli yokulawula ye-AJA Iletha i-KONA kanye ne-Io Amakhasimende Ukutholakala Okulula Kwezici ezintsha ze-Adobe Premiere Pro HLG HDR
Olandelayo: SMPTE Hollywood ukubamba uRob Hedrick weNational Hot Rod Association ku- “Meet an Industry Innovator” Webinar